Mitosaka amin’ny tambajotram-piarahamonina, indrindra ny facebook fa lafo vidy noho ny ain’ny Malagasy maro ny filoham-pirenena vahiny iray tahaka an’i Paul Kagamé. Manamafy izany ireo fidirana mivantana amin’ny haino aman-jery, indrindra amin’ny onjam-peo fa efa maro ny antso natao tamin’ny fitondrana, fony vao nijoro, amin’ny hametrahana ireny fakana sarimihetsika ireny manerana ny elakela-trano sy ny arabe, indrindra teto an-drenivohitra saingy tsy nisy akony. Gaga anefa ny mpanara-baovao fa rehefa ny filoham-pirenena Rwandais no tonga dia tanteraka tsy nisy nangataka izany. Nisy fotoana nirongatra ny fakana an-keriny sy ny fanendahana mitam-piadiana ka efa saika faritra mena avokoa teto Antananarivo, indrindra ny 100 andro voalohany nitondran’ny filoha ankehitriny. Mampitaraina ireo mponina ihany koa ny fanjavonana ankizy, indrindra ireo zazalahy kely lasan’ireo mpaka an-keriny raha tsy hitanisa afa tsy ilay zaza lahikely teny 67ha navotan’ny zandary tamin’ny vola iray sakaosy, Ny Avo avy eny Antehiroka hita faty ary ity tovolahin’ny Sabotsy Namehana iandrasana vaovao ofisialy ity. Tsy azo lavina fa mahay mandray vahiny ny Malagasy saingy mpanara-baovao maro no miandrandra fa hitohy aorian’ny fetim-pirenena izao fametrahana « caméra de surveillance » manerana ny tanàna izao.Ho tanteraka tokoa ve izany sa…. ?